लुगा खोल्दा कोइ थुक निले, कोइ छिरे बाथरुममा ! यो कस्तो दोहरी भिडियो आफै बोल्छ - NepalDut NepalDut
लुगा खोल्दा कोइ थुक निले, कोइ छिरे बाथरुममा ! यो कस्तो दोहरी भिडियो आफै बोल्छ
लोक गायनबाट अभिनयमा जम्प गरेकी कलाकार ज्योती मगर कामले भन्दा धेरै पोसाकका कारण चर्चामा रहँदै आएकी छिन् ।
उनले म्यूजिक भिडियोदेखि विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा लगाउँने पहिरनले उनलाई अधिकांश समय विवादमा तानिरह्यो । तर, उनलाई यस्ता खाले विवादले कुनै असर गरेको देखिदैन् । उनी समय-समयमा विभिन्न पोजका कामुक तस्विरहरु फेसबुक पेजमा अपलोड गरिहन्छिन् ।
ज्योति मगरलाई आम दर्शकले अश्लील गीत गाएको आरोप लगाउने गरेपनि उनी भने आफ्ना कुनै पनि गीतमा अश्लीलता नभएको बताउँछिन् । ‘मेरा कुनै गीत पनि अश्लील छैनन् । मान्छेको दृष्टिकोण नै त्यस्तै छ,’ ज्योति समाजले आफ्ना गीतलाई अश्लीलताको आरोप लगाएको बताउँदै थप्छिन्, ‘मान्छेलाई त्यस्तै गीत चाहिएको छ तर उहाँहरु गीत सुनेर आनन्द लिने तर, नगाइदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। गुल्मीको शान्तिपुर भएको कार्यक्रममा ज्योति मगरको र बैकुण्ठ महतको दोहरी घम्सा घम्सी ( भिडियोमा)